लोग्नेले बढी माया गरेपछि वाक्क लाग्यो भन्दै पत्नीले मागिन् डि*भोर्स - Sidha News
अर्थ / बजार
लोग्नेले बढी माया गरेपछि वाक्क लाग्यो भन्दै पत्नीले मागिन् डि*भोर्स
एजेन्सी। पति पत्नीबीच झैझ*गडा हुँदा, मन नमिल्दा तथा पतिले राम्रोसँग पालन पोषण नगर्दा पति पत्नीबीच डि*भोर्स हुने गरेको त थाहा भएकै कुरा हो । तर यो दुनियामा केही महिला यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जसले लोग्नेले बढि माया गर्दा पनि डि*भोर्स माग्दा रहेछन् ।
पत्यारै नलाग्ने यो घ*टना युएइको हो । ती महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग डि*भोर्स माग्दा यस्तो कारण उल्लेख गरेकी छिन् कि त्यो सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ । लोग्नेले आफुलाई आवश्यकता भन्दा धेरै माया गरेको उनको आरोप छ । एक वर्षअघि विवाह गरेकी ती महिलाले हालै अदालतमा डिभोर्सका लागि निवेदन दिइन् । लोग्नेले आफुलाई चाहिने भन्दा धेरै प्रेम गरेको र आफुलाई बढि प्रेम मन नपर्ने उनको तर्क छ ।
अदालतमा भएको बहसका क्रममा उनले इजलासमा भनेकी छिन्, ‘मेरो पति न त म सँग झ*गडा गर्छन्, न त मलाई कहिल्यै चि*न्तित हुन दिन्छन् । लोग्नेले आफुलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्दा म वा*क्क भएँ र प्रेमकै कारण मेरो जिवन नर्क बन्यो । त्यसैले मैले डि*भोर्स गर्ने निर्णय गरेकी हुँ ।’लोग्नेको अत्यधिक प्रेम र स्नेहबाट आफु प्रता*डित भएको उनको भनाई छ । बिहे भएको एक वर्षमा एकपटक पनि झ*गडा हुन नपाएको उनले बताएकी छिन् ।
आँखै अगाडि ८ करोड ५० लाख
ल्वाङ पनि नलिने सिधाकुराका पत्रकारलाई ‘कार’
टेकुमा परिक्षण गरेका एक व्यक्तिमा भेटियो
सोमबारदेखि काठमाडौंमा बिजुली बस चल्ने, यस्तो
दोस्रो बिहे गर्दै नायिका स्वेता खड्का,
किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्ने गर्छ
‘विश्वमै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भिलेन जन्मिन्छन्, लड्दै
चीनमा भेटियो मानव जातिकै सबैभन्दा नजिकका
विद्यालयका पुस्तकमा पुरानै नक्सा
कोरोना महामारीकै बीच नेपालबाट रोजगारीका लागि
उज्वलको सकारात्मक छवि अनुकरणीय : कांग्रेस
4 महिना अगाडि
अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याएर सरकारले संविधान
सुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलाको
गरिबी निवारण कोष खारेज
किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्ने गर्छ ? यस्तो छ रोचक कारण
नायक किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदाल वसन्तपुरमा खाना बाँड्दै !
को हुन् ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोनसनकी श्रीमती ?
यो हो संसारकै महँगो चियापत्ती, १ किलोको मूल्य १५ करोड
सिकिस्त बिरामीसँग फोटो सेशन, दुई प्याकेट जुस हस्तान्तरण !
संझना वुढाथोकीको बर्थ डेमा शंकर भन्छन्–‘अझैपनि तिमीसँग काम गर्ने मन छ’
जब सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्यौँ स्वर्ग भनेकै यहीहो जस्तै भयो !
आयुष्यमानले गर्भवती श्रीमतीको स्याहार गरेको भिडिओ चर्चामा
यो वेबसाइट सिधा न्युजको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
सिधा न्युज मिडिया प्राली
अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल
सुचना बिभाग दर्ता नं:
© Copyright 2021, Sidhanews. All Rights Reserved Designed By: Techinfo Nepal